WINDOWS 8.1 NWELITE 1 - IHE DỊ ỌHỤRỤ? - WINDOWS - 2019
Windows 8.1 Nwelite 1 - ihe dị ọhụrụ?
Mmelite mmiri nke Windows 8.1 Nwelite 1 (Mmelite nke 1) kwesiri ịtọhapụ ya n'ime ụbọchị iri. M na-atụ aro ka ị mara ihe anyị ga-ahụ na nwelite a, lee anya na screenshots, chọpụta ma enwere ọganihu dị mma nke ga-eme ka arụ ọrụ na sistemụ dịkwuo mfe.
Ọ ga-ekwe omume na ị gụọrịrị nyocha Windows 8.1 Nwelite 1 na Intaneti, ma anaghị m ekwu na ị ga-achọta ozi ndị ọzọ n'ime m (ọ dịkarịa ala abụọ ihe m na-eme atụmatụ ịkọwa, ahụghị m na nyocha ndị ọzọ n'ọtụtụ ebe).
Ndozi maka kọmputa n'enweghị touchscreen
Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke mmelite na mmelite ahụ gbakwunyere ime ka ọrụ ndị ahụ dị mfe maka ndị ọrụ ahụ na-eji òké, ọ bụghị ihuenyo aka, dịka ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ na kọmputa nkwụsị. Ka anyị hụ ihe mmezi ndị a gụnyere.
Usoro mmemme maka PC na ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ
N'uche m, nke a bụ otu n'ime ngwọta kachasị mma na mbipute ọhụrụ ahụ. Na mbipute Windows 8.1 ugbu a, ngwa ngwa mgbe echichi, mgbe ị na-emepe faịlụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, foto ma ọ bụ vidiyo, mepee ngwa ihuenyo zuru oke maka interface Metro ọhụrụ. Na Windows 8.1 Nwelite 1, maka ndị ọrụ ahụ nke enweghị ngwaọrụ na touchscreen, site na ndabara ihe omume maka desktọọpụ ga-amalite.
Gaa usoro ihe omume maka desktọọpụ, ọ bụghị ngwa Metro
Menus ederede na ntinye mmalite
Ugbu a, akara aka nri ziri ezi na-eme ka oghere nke menu dị na ya, maara onye ọ bụla na-arụ ọrụ na mmemme maka desktọọpụ. Na mbụ, ihe ndị dị na menu a gosipụtara na ogige ndị ahụ.
Ogwe nwere mkpọchi iji kpochapụ, daa, ebe nri na aka ekpe na ngwa Metro
Ugbu a ị nwere ike mechie ngwa maka Windows 8.1 nke ọhụụ ọ bụghị naanị site na ịdọrọ ya na ihuenyo, kamakwa na ụzọ ochie - site na ịpị obe n'ogo aka nri. Mgbe ị na-atụgharị pointer pouse na nsọtụ nke ngwa ahụ, ị ​​ga-ahụ otu panel.
Site na ịpị akara ngosi ngwa ngwa n'akụkụ aka ekpe, ịnwere ike imechi, belata, tinyekwa window ngwa ahụ n'otu akụkụ nke ihuenyo ahụ. Ihe mgbagwoju anya na ida gbakwunyere na-enwekwa aka n'akụkụ aka nri nke panel.
Mgbanwe ndị ọzọ na Windows 8.1 Nwelite 1
Imelite ndị na-esonụ maka mmelite ahụ nwere ike ịba uru, n'agbanyeghị ma ị na-eji ngwaọrụ mkpanaaka, mbadamba, ma ọ bụ desktọọpụ PC na Windows 8.1.
Bọgharịa nchọta ma gbanyụọ na ihuenyo ụlọ
Ntuchi ma chọọ na Windows 8.1 Mmelite 1
Ugbu a na ihuenyo mbụ enwere bọtịnụ nchọta na nkwụsịtụ, ya bụ, iji gbanyụọ kọmputa ahụ, ịkwesịrị ịgbanyegharị na panel ahụ n'aka nri. Ọnụnọ nke bọtịnụ nchọnchọ dịkwa mma, n'ime ihe ụfọdụ m gwara m, ebe m dere "tinye ihe na ntanetị mbụ," a na-ajụkarị m: ebee ka m ga - ede ya? Ugbu a, ajụjụ a agaghị ebili.
Ụdị ọdịdị nke ihe egosipụta
Na mmelite ahụ, ọ ga-ekwe omume ịtọ ntọala nke ihe niile dị iche iche n'ime oke ókè. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị na-eji ihuenyo nwere diagonal nke 11 sentimita asatọ na mkpebi karịrị Full HD, ị gaghị enwe nsogbu na eziokwu ahụ bụ na ihe niile dị ntakịrị (n'ụzọ isi na ọ gaghị ebili, na omume, na mmemme kachasị mma, ọ ka ga-anọgide na-enwe nsogbu) . Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe nha nke ihe ndị ahụ iche iche.
Metro ngwa na ọrụ
Na Windows 8.1 Nwelite 1, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye ụzọ mkpirisi ngwa na ntinye ohuru na ngalaba ọrụ ahụ, nakwa, na-ezo aka na ntọala ọrụ, mee ka ngosipụta nke ihe niile metro ngwa ma hụcha ha mgbe ị na-ehicha òké.
Igosi ngwa na listi niile Ngwa
Na nsụgharị ọhụrụ ahụ, nhazi ụzọ mkpirisi na ndepụta "Ngwa niile" dị iche. Mgbe ị na-ahọrọ "site na otu" ma ọ bụ "aha", a na-agbajikwa ngwa n'ụzọ dị iche karịa ụdị sistemụ dị ugbu a. N'uche m, ọ dịwanye mfe.
N'ikpeazụ, ihe dị m ka ọ dị oke mkpa, ma, n'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịba uru maka ndị ọrụ ndị ọzọ na-eche ka a hapụ ntọala Windows 8.1 Nwelite 1 (Ntọhapụ nke mmelite ahụ, ọ bụrụ na m ghọtara n'ụzọ ziri ezi, ga-abụ April 8, 2014).
Ịnweta nchịkwa nchịkwa site na windo "gbanwee kọmputa"
Ọ bụrụ na ịga na "Change na kọmputa ntọala", mgbe ahụ, site n'ebe ahụ ị nwere ike mgbe ọ bụla banye na Windows Control Panel, n'ihi na nke a, ihe ndepụta menu kwekọrọ n'okpuru.
Ozi gbasara ohere diski ike eji
Na "Ntọala kọmputa na-agbanwe agbanwe" - "Kọmputa na ngwaọrụ" nwere ihe ọhụrụ Disk Space (ohere diski), ebe ị nwere ike ịhụ oke ngwa awụnyere, ohere nwere site na akwụkwọ na nbudata na Ịntanetị, yana ole faịlụ dị n'ime nkata.
N'oge a ka m gụchara obere nyochaa nke Windows 8.1 Mmelite 1, achọtabeghị m ihe ọ bụla. Ikekwe nsụgharị ikpeazụ ahụ ga-adị iche na ihe ị hụrụ ugbu a na screenshots: chere ma hụ.